Sida loo qiyaaso astaamaha desktop-ka ee macOS | Waxaan ka socdaa mac
Ignacio Sala | | macro High Sierra, Tababarada
Apple marwalba waxaa lagu gartaa inay siiso tiro badan oo ah ikhtiyaarro habayn ah marka la isku hagaajinayo qalabkeenna haddii aan dhibaato xagga aragtida ah qabno. Kala doorashooyinka xulashada, macOS ayaa noo oggolaanaya balaadhi ama dhimo cabirka astaamaha lagu muujiyo desktop-ka kumbuyuutarkeena.
Kordhinta ama yareynta cabbirka astaamaha kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka ayaa naga caawin kara inaan dhigno waxyaabo badan dusha desktop-ka (yaraynta cabirkooda) ama si fudud u ballaarinno cabirkooda si aan si fiican ugu aragno magaca iyo qeyb ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay. Nidaamkani waa mid aad u fudud oo waxaan ka imid Mac waxaan ku tusaynaa sida aan u samayn karno.
Inbadan ballaadhi sida loo yareeyo cabbirka astaamaha laga soo bilaabo desktop-keena, waa inaan meel iska dhignaa meel kasta oo aan saarnaa oo aan ku dhajinnaa badhanka midig ee midig ama ku riix laba farood oo ku yaal trackpad-ka
Marka xigta, dhagsii Muuji ikhtiyaarada muujinta. Liistada hoos ku qoran, waxaan aragnaa in cabbirka astaamaha caadiga ahi yahay 64 × 64 dhibco. Haddii aan dooneyno inaan weyno ama yareyno cabirka astaamaha, waa inaan uxirnaa baarka bidix, hadaan rabno inaan kayarno, ama dhanka midig, hadii aan rabno inaan ka weyno
Xulashada xigta ayaa noo ogolaaneysa Deji faylka galka desktop-ka, qaabkan waxaan ku ballaarin karnaa ama ku yareyn karnaa kala-fogaanshaha u dhexeeya faylasha. Waxay kaloo noo ogolaaneysaa inaan balaarino cabirka qoraalka feylasha ee kujira desktop-ka iyo waliba inaan bedelno booska calaamadaha feylka.
Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale noo ogolaataa muuji horudhaca thumbnail ee faylasha, oo ay weheliyaan faahfaahinta faylka, oo ku habboon marka aan yeelanayno tusayaal ama sawirro badan oo ka mid ah kombuyuutarrada 'Mac desktop' ah. Marka aan sameyno dhammaan isbeddelada aan dooneyno, daaqadda ayaan xireynaa. Mar kasta oo aan isbeddel sameyno, isla markiiba waxaa lagu soo bandhigi doonaa dusha desktop-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo qiyaaso astaamaha desktop-ka ee macOS
Miyaynu arki doonnaa HomePod iib ah wax ka yar 200 euro?
Pad-ka, kani waa munaaraddii ay ka dhisayeen Dubai oo ku dhisan iPod